Frequently asked questions for workers (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions for workers (isiXhosa)
Kuthetha ukuthini ukuba ndisebenzela kwicandelo elibalulekileyo nelidingekayo ngeli thuba?
Icandelo loshishino ngalinye elibalulekileyo nelidingekayo ngeli thuba kufuneka lenze isicwangciso sendlela ebonisa ukuba baza kuqhubeka njani nomsebenzi wabo: kuya kufuneka bakwazi ukukhawulelana nemiqathango efanelekileyo yokhuseleko nempilo yokunqanda ukunwenwa kweCovid-19, okanye kwenziwe amalungiselelo okuba umsebenzi obalulekileyo nodingekayo ngeli xesha wenzelwe ekhaya.
Ungasebenzela ekhaya ukuba uyakwazi, kodwa ke umphathi wakho uya kukuxelela ngamalungiselelo enziwayo emsebenzini wakho.
Ndingumsebenzi obalulekileyo nodingekayo ngeli xesha– yintoni ekufuneka ndiyenzile ukuzigcina ndikhuselekile?
Abasebenzi kufuneka bathathele iimpilo zabo ingqalelo nokhuseleko, kwakunye nempilo nokhuseleko lwabanye abantu, ngeli xesha basebenzayo. Oko kuthetha ukuba ukulandelwa nokusebenzisana nemiyalelo yempilo nokhuseleko ebekiweyo, imigaqo neenkqubo oyinikiweyo, yokuhlala ikhuselekile nokuqinisekisa ukuba akuyibeki engxakini impilo nokhuseleko lwabanye abantu odibana nabo, ngeli xesha usebenzayo.
Sebenza nomqeshi wakho ukunceda ukuphuhlisa iindlela ezintsha zokusebenza ezifunekayo ukukugcina wena nabanye nikhuselekile.
Ndiligcisa (artist) – ingaba akhona amalungiselelo enkxaso enziweyo ukuqinisekisa ukuba sinayo imali zide iishowu (imiboniso) ibuyele kwakhona?
ISebe leNkcubeko, iMiboniso neMidlalo lixakekile libambe iingxoxo namaqela awohlukeneyo ukujonga ukuba yintoni enokwenziwa ukukhawulelana nale meko.
Siyayazi ukuba ukuba ii-artist ziyachatshazelwa kakhulu yile miqathango siya kujonga iindawo ezahlukeneyo sibeke inkqubo yendlela yokuthetha ngale meko. Siya kukhokelwa liSebe leSizwe ukuqulunqa esi sicwangciso.
Ndisebenza kushishino lwezolimo - ndingazifumana phi iinkcukacha ezithe vetshe malunga nokusebenza ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?